? Molnupiravir (မိုနူပီရာဗီယာ) - Richard Myo Thant
? Molnupiravir (မိုနူပီရာဗီယာ)
October 7, 2021 October 7, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ? Molnupiravir (မိုနူပီရာဗီယာ)
ကိုဗစ်အတွက်အလားအလာကောင်းနေတဲ့ဆေးအကြောင်းရေးချင်နေတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ။ အကောင့်ပိတ်ခံထားရလို့ ရေးတင်လို့မရဖြစ်နေတာပါ။
မိုနူပီရာဗီယာဟာ ဗိုင်းရပ်စ်သတ်တဲ့ စမ်းသပ်ဆေးဝါးဖြစ်ပြီး တုပ်ကွေးအတွက် ၂၀၁၄ လောက်က အမေရိကန် Atlanta ရှိ Emory University ကစတွေ့ခဲ့တဲ့ဆေးပါ။
ဆေးနာမည် Molnupiravir ကို တူကိုင်တဲ့ ဂျာမန်ဒဏ္ဍာရီလာနတ် Thor ရဲ့ တူ လက်နက်ဖြစ်တဲ့ Mjölnir အမည်ကိုယူပြီးမှည့်ထားတာပါ။
အမေရိကန်ဆေးကုမ္ပဏီ Merck & Co., Inc. ဟာ Ridgeback Biotherapeutics နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လကတည်းက မိုနူပီရာဗီယာကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။
အခုလောလောဆယ်တွေ့ရှိထားတဲ့ စမ်းသပ်မှုဒေတာတွေအရ ကိုဗစ်ကြောင့်ဆေးရုံတက်ရမှုကို (၅၀) ရာနှုန်းအထိလျော့ကျစေတယ်လို့ Merck က အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ကိုဗစ်လူနာပေါင်း (၃၈၅) ယောက်ကို မိုနူပီရာဗီယာပေးကြည့်တဲ့အခါမှာ (၂၈) ယောက်ပဲ ဆေးရုံတက်ပြီးကုသရပါတယ်။
အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာလည်း ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ ရာနှုန်းနဲ့ပြောရင် (၇•၈) ရာနှုန်းဆေးရုံတက်ရတယ်ပေါ့။
တခြားတဖက်က ကိုဗစ်လူနာ (၃၇၇) ယောက်ကို placebo ထင်ယောင်ထင်မှားအာနိသင်မရှိတဲ့ဆေးပေးခဲ့ပါတယ်။
၂၉ ရက်အကြာမှာ အဲ့ဒီ (၃၇၇)ယောက်ဘက်က (၅၃) ယောက်ဆေးရုံတက်ရပြီး (၈) ယောက်ကိုဗစ်နဲ့သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ရာနှုန်းနဲ့ပြောရင် မိုနူပီရာဗီယာမသုံးတဲ့ဘက်က (၁၄•၁) ရာနှုန်းဆေးရုံတက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့။
အဲ့ဒါကြောင့် မိုနူပီရာဗီယာဟာ ကိုဗစ်ကြောင့်ဆေးရုံတက်ရနိုင်ခြေ (၅၀) ရာနှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားတယ်ဆိုပြီးကောက်ချက်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မိုနူပီရာဗီယာဟာ ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ မျိုးဗီဇ genetic code ကို အမှား error တက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
မိုနူပီရာဗီယာကမှ Covid-19 အတွက် ပထမဦးဆုံး ဗိုင်းရပ်စ်သတ်သောက်ဆေး the first oral antiviral medication ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် FDA ကခွင့်ပြုချက်ကျပြီလား
အခုလေ့လာစမ်းသပ်မှုဟာ လူပေါင်း (၄၀၀) နီးနီးမှာပဲစမ်းသပ်ထားတာမို့အရေအတွက်နည်းသေးတယ်ဆိုပေမယ့် ရလဒ်ကောင်းတာကြောင့် အမေရိကန် FDA မှာ အသုံးပြုခွင့်ရဖို့စကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူမှာ မိုနူပီရာဗီယာကို စင်ကာပူ HSA ကခွင့်ပြုရင် ဝယ်ယူဖို့ supply & purchase agreement စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ကြောင်း ဆေးကုမ္ပဏီ MSD ကကြေညာပါတယ်။
နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ အမေရိကန်အစိုးရကို Merck က (၁•၇) သန်း ဆေးပမာဏစာ မိုနူပီရာဗီယာရောင်းဖို့စာချုပ်ချုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ဆေးတစ်ခါပေးစာအတွက် ဒေါ်လာ (၇၀၀) (ယနေ့ဒေါ်လာပေါက်ဈေးနဲ့ ၁၃ သိန်းခွဲလောက်) နဲ့ အမေရိကန်အစိုးရကိုရောင်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီဈေးဟာ တကယ်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစားရိတ်ရဲ့ အဆ (၄၀) လောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ ရီပို့ထွက်လာပါတယ်။
ဒီလိုဆေးဈေးနှုန်းကို သုသေသနလုပ်ခဲ့တာက Harvard School of Public Health နဲ့ လန်ဒန်က King’s College Hospital တို့ဖြစ်ပြီး မိုနူပီရာဗီယာဆေးပမာဏ (၅) ရက်စာ (five-day course) ကို ဒေါ်လာ (၁၇•၇၄) ပဲ ထုတ်လုပ်စားရိတ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ Emory University ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၉)သန်းကို grants အနေနဲ့ ၂၀၁၃ နဲ့ ၂၀၂၀ ကြားမှာချပေးထားတဲ့အတွက် အဲ့ဒီလောက်ဈေးမကြီးသင့်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။
ဆေးကုမ္ပဏီ Merck ဟာ ကိုဗစ်စဖြစ်နေချိန်မနှစ်ကမေလမှာ မိုနူပီရာဗီယာထုတ်လုပ်ခွင့်ကို ကမ္ဘာလုံးစာအနေနဲ့ ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်လို့ မိုနူပီရာဗီယာ Molnupiravir ကိုအမေရိကန် FDA ကအသုံးပြုခွင့်သာချပေးလိုက်ရင် Merck နဲ့ Ridgeback တိူ့ဟာ ဒေါ်လာ (၇) ဘီလျံလောက်အထိ အချီကြီးပွသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို မိုနူပီရာဗီယာ Molnupiravir ရောက်လာနိုင်သလားဆိုရင် Merck နဲ့ Ridgeback တို့ဟာ အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဆေးကုမ္ပဏီ အနည်းဆုံး (၈) ခုနဲ့ licensing agreements ထိုးပြီးပြီလို့ဆိုပါတယ်။
အိန္ဒိယဆေးကုမ္ပဏီကြီးတွေကနေ မြန်မာပြည်ကိုတင်သွင်းတဲ့အခါမှာ အင်မဖြစ်ဖို့သာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။
အတုအပနဲ့ ဒီအကြောင်းတွေကလည်း rp ထိလွန်းတော့ မရေးချင်တော့ပါဘူး။ အခုတောင် မိုနူပီရာဗီယာ Molnupiravir ဆေးအကြောင်းကို အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ကတည်းက မိဘပြည်သူတွေကို အသိပေးချင်ပေမယ့် အကောင့်ရမ်းသမ်းအဘန်းခံနေရတဲ့အတွက် ရေးလို့မရဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေအတွက် အချိန်နဲ့အမျှနစ်နာမှုတွေ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သိရသလောက်လိုင်စင်ရ အိန္ဒိယဆေးကုမ္ပဏီကြီးတွေကတော့ Aurobindo Pharma, Cipla, Dr Reddy’s Labs, Emcure Pharmaceuticals , Hetero Labs, Sun Pharmaceuticals , Torrent Pharmaceuticals နဲ့ Viatris တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကြောင့်ဆေးရုံတက်ရနိုင်ခြေ (၅၀) ရာနှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားနိုင်တဲ့အပြင် ကိုဗစ်မျိုးကွဲ ဒယ်တာ delta နဲ့ gamma ဂန်မာတို့မှာပါသုံးလို့ရတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် လက်ရှိအချိန်အထိ အလားအလာအကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်နေပါတယ်။
အခုလောလောဆယ် ဒီဆေးသတင်းထွက်တာနဲ့ Merck ရဲ့ရှယ်ယာဈေးတက်ပြီး ကာကွယ်ဆေးကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရှယ်ယာဈေးနည်းနည်းကျဆင်းသွားပါတယ်။
မြန်မာပြည်နဲ့တကမ္ဘာလုံးအတွက် အကျိုးပြုကိုဗစ်ကုသဆေးအမြန်ရရှိလာပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
?? လစ်သူယေးနီးယားဟာ တရုတ်ပြည်ကနေသူ့သံအမတ်ကိုပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
September 4, 2021 September 4, 2021 Richard Myo Thant